Chii chinonzi Primobolan (methenolone enanthate)?
zvose zviri zviviri Methenolone Enanthate (303-42-4) uye Methenolone Acetate (434-05-9) inogadzira zvimwe zvinoshandiswa, uye basa ravo rinenge rakafanana chete kuti Methenolone Enanthate ine ester yakaiswa pairi kuti ibatsire kuderedza kusunungurwa kwe steroid mumuviri. Uyewo, Methenolone Enanthate inotungamirirwa kuburikidza nejisi apo Methenolone Acetate inogadzirwa nemuromo.
Primobolan yakaratidza kukosha kwayo uye kubudirira uye iyo pasina mubvunzo inokodzera kuva pakati pe 'steroid yakakwana' mumusika. Chibereko chacho chinouya nemigumisiro isingagumi uye ngozi isina kukwana uye nemigumisiro. Iyo Primobolan steroid ndiyo mhinduro yakanakisisa kune ani zvake anoda kusimudza steroid yavo uye kuichengetedza ikoko kwenguva yakareba.
Steroid inonzi DHT-inogadzirwa, iyo inoita kuti iite zvinhu zvakafanana nemubereki wayo hormone. Izvi hazviiti kuti tendeuke kune estrogen sezvo inoratize enzyme yayo isingagoni kuipisa. Izvi zvinoita kuti zvive zvakachengeteka kune vese vashandisi uye hapana munhu anofanira kutarisana chero yeserogen yemigumisiro yemigumisiro mushure mekushandisa chidimbu kunze kwekubatanidza nayo nedzimwe steroid. Izvi zvinoreva kuti izvi zvinogona kuva nemigumisiro hazvipo mushure mekushandisa Primobolan; kuchengetedza mvura, gynecomastia uye kugadzirisa mafuta. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei vazhinji vanogadzira muviri uye vatambi vanoritaurira sechidimbu chekucheka pamusana pekubwinya kwahwo panguva yekufa-kurasikirwa.
Zvisinei, steroid ine yakadzama anabolic simba kupfuura Testosterone, uye ichi ndicho chikonzero hachidikanwi nevadziviriri vemitambo nevatambi vanokwidziridza kana vamwe vanhu vanoda kuwana musimba unooneka uye simba. Primo inoshanda zvakanakisisa kana yakavharwa nemamwe anabolic steroid kunyanya kubatsira pakubhururuka uye kuonda kwehutu. Kana ikashandiswa iri yoga, inofanira kutorwa mumitambo yakakwirira zvisingaiti kuti ipe mhinduro.
Steroid inouya nenzira mbiri. Icho chinonzi oral version iyo Methenolone Acetate, uye ipapo pane Methenolone Enanthate iyo inonzi injectable version. Methenolone Enanthate inoumbwa nokubatanidza Primobolan ester pa Methenolone Acetate, inobvumira vashandi kuti vave nesteroid yavo yakaderedzwa uye inoita kuti varambe varipo kwenguva yakareba kusvikira vhiki mbiri.
Kubudirira kwayo, zvisinei, kunobva pane zvaunoda kuwana kubva pazviri. Vamwe vanhu vanotya kuishandisa sezvo vasingazivi kuti vangashandisa sei zvakanakisisa. Primobolan zita rinobva kuna Primo, zvinoreva kutanga kana kuverenga imwe. Inoshanda kuburikidza nekuderedza kunetsa kwemigumisiro yehutsika uyerogenic unhu nekuvandudza mararamiro ayo anebolic uye neichi; vashandi vanogona kutarisira zvishoma zvingava nemigumisiro yacho. Iyo inopedza mikana yekutambura nehavha yepamusoro yeropa, gyno ngozi, kukuvadzwa kwechiropa, kubviswa kweHTPA kana chero mamwe manzwiro asina kujairika.
Iine anabolic yakakwirira uye zvishoma uyerogenic properties, steroid iyi yakachena uye yava pedyo nekuve yakakwana pakati pevamwe steroid. Chigadzirwa chinotanga kushanda pakarepo, asi vashandisi havafaniri kutarisira kutanga kupupurira misumbu kuwana pakarepo sezvo nzira inogona kutora nguva. Ichi ndicho chikonzero nei vanhu vachigutsikana kuti Primobolan inotora nguva yokupinza, asi handizvo. Yakave yakagadzirirwa kubatsira mashumbu kukura nenzira yavanoita nenzira yakasununguka chete iyo inowanzoitika pakuwedzerwa kutengesa.
Primobolan inoshandisa nekuchengetedza nitrogen kubatsira masimba kukura, uye naizvozvo, zvinokurudzira kuti iwe uishandise mune zvakawanda zveproteiniti kuti uwedzere kubudirira kwayo. Kuitora iyo neprotein yepamusoro yakawanda pamwe chete nemamwe mapuroteni anowedzera inobvumira kuti ikwanise kushanda pakurongeka kwayo.
Kunyange zvazvo zvose Primobolan enanthate (303-42-4) uye Primobolan acetate (434-05-9) inogona kuve yakafanana, inouya nemhando dzakasiyana dzinoparadzanisa mbiri. Primobolan (methenolone enanthate) inotorwa kuburikidza nejeri.
Ko Primobolan (methenolone enanthate) inoshanda sei?
Enanthate is steroid injectable inoshanda kuburikidza nekusimudzira inevana anabolic uye zvishoma uyerogenic properties. Inoshanda nekugadzirisa mamiriro apo kukanganisa kwe steroid kunokwira uye kunogara ikoko kwemavhiki maviri. Izvi zvinoita kuti zvive sarudzo yakanaka kune ani zvake anoda kuwedzera steroid yavo yepamusoro nekugara iyo nzira kwenguva yakareba. Iyi inorable format ye methenolone yakakurumbira pamusana pemari yaro inoshanda uye inobudirira kune varume vanoda kuvaka miviri yavo pamutengo wakakura. Nandrolone Phenylpropionate (NPP) Purogiramu, Zvigumisiro, Zvipo, Nhamba
Chibereko chacho chinowanzoshandiswa nevaya vanoda kuchengeta eserogen yavo uye androgenic yakafanana nehutachiwana pahuse. Inonyanya kuzivikanwa nekucheka matanho pamusana payo ine unyoyo anabolic hunoita kuti huve hwakakosha mukusimbisa mishonga inosuruvara munguva yekutanga kugadzirisa kudya. Paunenge uchishandisa chigadzirwa ichi, vanhu havachazofaniri kushungurudzika nezvakawanda zvakasvibirira mashizha sezvo zvisiri sromidhe steroid. Kana uchida kuva, munhu anogonawo kuwedzera iyi steroid kuti iite maitiro ekubvumira kubatsira mukusimudzira hupenyu hwevanabolic o kuenderera mberi nekuderedza chero zvingave isrogen uye androgenic madhara.
Iro androgenic yakagadzikana nemigumisiro inowanika, asi dzimwe nguva inowanzoitika kune vashandisi vanoshushikana kana vamwe vanhu vanosarudza kuitora yakawanda. Ichi chigadzirwa chinonzi steroid yakachengeteka zvichienderana nemigumisiro yaro miviri kana ichienzaniswa nemimwe michina uye kunyange zviri nani; kukosha kwayo kudarika kukosha kwemari yakabhadharwa.
Chikamu chiduku chaicho chinopa migumisiro yakanaka. Somuenzaniso, chirwere che400mg vhiki rakanaka kupa zviitiko zvinoonekwa, asi vanhu vakawanda vanoda huwandu hunoti kusvika ku600-800mg kwevhiki vachireva kuti inopa migumisiro yakakwirira uye yakanaka. Izvi zvinoreva hukuru hwemasumbu, uye hunoratidzwawo kuti muyero une zvishoma zvingava nemigumisiro. Zvisinei, sezvo chikwata chichiwedzera, migumisiro yemigumisiro inova yakanyanya zvikuru, uye naizvozvo, zvinotenderwa kuti vanhu vave vakangwarira uye vazive miganhu pavanoshandisa steroid. Mumwe haafaniri kunge akaisa pfungwa pane zvakakosha pfuma iyo vanocherechedza migumisiro yechirwere. Zvakanaka zvikuru kana munhu achiedza kuenzanisa izvo zviviri.
Primobolan inorondedzerwa pasi pemiti yeDHT uye mhuri yemafanana. Kubva pane chimiro cheDihydrotestosterone, steroid ino ine kugadzirisa uye hukama hwepamusoro pakati peatomu maviri neakoni. Izvi zvakaratidza kuti zvakashandiswa zvikuru mukusimudzira keto boka iro rinokonzera kuwedzera mahomoni anebolic simba. Kunyorera kunonziwo carboxylic acid uye ethanoic acid. Inoshanda kuburikidza nekuchinja ma hormone hafu yeupenyu uye kubudisa chiyero kwemazuva kusvika kumazuva 14. Izvi zvinokonzerwa nenguva inotorwa nemakemikari kuti iparadze chisungo pakati pe steroid ester uye hormone. Kamwe iyo ester uye hormone zvakaparadzana, Methenolone yasara shure uye inoramba iri mumuviri kwenguva yakareba.
Primobolan inotakurwa nemamwe steroid kuti ipe zvibereko zvakakura mushure mekushandisa. Munguva yekucheka-shanduka, somuenzaniso, inogona kushandiswa pamwe chete ne-non-aromatizing androgen kuti ibatsire mukuomesa misungo panguva inovimbisa kusachengetwa kwemvura. Vamwe vanofarira kuwedzera Primobolan kumitambo yavo ye testosterone kubatsira mukuwedzera hupenyu hwevanabolic hwekufamba kwenguva nekuderedza madhara. Icho chinonyengera chakanaka kune vanhu vane testosterone kuvhiringidzika uye vanoda kuchiwedzera chimwe chigadziro kukwidziridza zvakanakira zvakadai sekuwana mishonga yakaoma panguva yekuona zvisingabatsiri zvakadai semvura yekuchengetedza.
Iyi steroid ine zvishoma mumashandisirwo ayo sezvo inonyanya kureva kutema maitiro uye panguva yekurasika kwemafuta. Izvi zvinonyanya kukonzerwa nekushaya simba kwayo vanabolic simba, uye nenzira yakakodzera, steroid neine low anabolic simba inofanira kushandiswa mumutengo wepamusoro kune avo vane high anabolic simba level. Muchiitiko ichi, kuwedzerwa kweananthati kunowanzove yakakwirira kune zvikwereti zvakanyanya asi vashandisi asi chenjerera kuti usapfuure muganhu unofanirwa sezvo izvozvo zvingaguma nemagumisiro akaipa.
Iyo yakakosha miitiro yekurumbidza ndiyo chikonzero chikuru nei Primobolan isingakurudzirwi kuwedzera kuwedzera kwekuwedzera uye kubvongodza. Ichi ndechokuti maitiro aizodaiwa kune izvi zvingave akawandisa. Ichi ndicho chikonzero nei steroid inowanzozara nemimwe michina kuti ipe ruzivo rwakakura. Kunyange panguva yekucheka, chirongwa chinosanganisira low anabolic steroids, Primobolan icharamba ichifanira kushandiswa muhombe yakakwirira yezvibereko zviri nani.
Kucheka kana kurasikirwa kwemaawa kunoda steroid neine low anabolic simba nokuti, panguva ino, mushumiri achange ari paanorori panguva yakadaro, mumwe anofanira kutarisa kuchengetedza nekuchengetedza uwandu panzvimbo pokufungisisa pakuwedzera mutsva . Anabolic steroids panguva yekucheka maitiro haafaniri kuwedzerwa masvingo kana kuderedza masero. Saka, Primobolan ndeyekusiyana nokuti inenge ichishandiswa kushandiswa muhomwe yepamusoro kuti ikurire simba risina anabolic simba. Icho Chinyorwa Chekupedzisira kuna Dianabol yekugadzirisa muviri
Vashandi vePhmobolan vanogona kutarisira kuwana hutano hwehutachiona hwepamusoro sezvo husingavhiringidzi nehutachiona hwetetermsterone. T ine hupenyu hunoshingaira hwemasvondo maviri chimwe chinhu chisingawanike mune dzimwe steroid. Izvi zvinotungamirirawo kudiki kusinganzwisisiki pamusoro pevanabolic zvinokonzerwa nekusasipo o kutendeukira kuDHT, kunakidza kweesrogen uye nekuda kwepakati mukati mehutano hwemabasa.
Nhamba yejairo injectable ye promobolin inofanira kuva yero yekutanga ye 200mg, uye 100mg vhiki nevhiki kusvika pakuguma kwerapi. Kushandiswa kwacho zvakadaro kunotsamira pamamiriro ekurapa emushandisi. Mumwe anogona kuenda ku100mg yega yega 1 kusvika kwemavhiki e2 kana 200mg mushure memazuva ose e2 kusvika ku3. Ini ndichitsinhwa steroid saloid se steroid, vanhu vakawanda vanoshandisa zvishoma 400gm kwevhiki kana zvigumisiro zvakanaka. Kana mumwe ari kungotarisa Primobolan cycle, imwe nheyo yakakwirira inokurudzirwa kana kuti yakawanda inowana. Vanhu vazhinji vanoenda ku750 kusvika ku1000mg kwevhiki. Nemhaka yehupenyu hwayo hunyoro, kuyerwa kwakadai kwakanyanya kunogona kuregererwa pasina kusangana kwakakomba migumisiro.
A Primobolan purogiramu inogona kumhanya kwemasvondo anonzi 12 ane marefu akareba kusvika kumasvondo e18 pakati pevashandi vane ruzivo vanoitora pamutengo mukuru. Maitiro acho anowanzobatanidzwa nemitambo yekucheka kana kurasikirwa kwemafuta. Steroid haigoni kushandiswa sehuwandu-kuwana kana kuvhara. Mavhiki ekupedzisira, inogona kushandiswa sepamberi yekukwikwidza mishonga kana vanhu vanoda kufambidzana mufotohoot kana mumakwikwi. Kunyanisa kunowanikwa mabhasikoro pamwe chete nemimwe michina ine zvimwe zvakafanana uye hafu inorarama nehuwandu o vadzidzisi vemiti vanoiisa na testosterone propionate uye vanoshandisa iyo yekutanga kwevhiki masere o kutenderera. Izvi zvinobatsira mumasisita mashekeri ekuchengetedza mukati menguva o low calorie inodya. Iyi injectable form of methenolone inogona kumhanya kana kusvika kumavhiki e10-12 zvichienderana nechinangwa chemuti.
Primobolan (methenolone enanthate) Mhinduro
Kana kutorwa pamitemo nemitemo, vashandisi vanogona kutarisira kuti vawane bark muscle, kuderedza mafuta mumuviri, kusimbiswa kwesimba simba uye kuwedzerwa kwemisungo yeporisovannosti. Iyi ndiyo steroid yakashandiswa zvikuru kubatsira mukuchengetedza nekuchengetedza misi mizhinji.
Primobolan (methenolone enanthate) inobatsira
Chii chinofanira kushandiswa nevashandisi mushure mekushandisa steroid iyi? Ngatitarise zvimwe zvezvingagoneka kana zvichishandiswa zvakanaka.
1. Kurasikirwa kwemafuta
Chimwe chezvakakosha zve Primobolan (methenolone enanthate) yakaora kurasikirwa. Inonyanya kushandiswa pakutsvaga mutsara iyo inosanganisira kukanganisa kwemazuva panguva yakaderera makori ekudya. Vashandi vanogona, saka, vanotarisira kuona kuchinja kukuru kwemafuta avo. Izvo zvakakoshawo kuchengetedza maonda emasimba akaoma anonyanya kukosha kwevarimi vemuviri.
2. Uturu kukura
Kunyange zvazvo isingawanzoshandiswa pakutsvaira, vashandisi vepelmi vanogona kutarisira kuona humwe hutsinye hukura. Iyo inogona kuva inoshanda inobatsira kugadzira, kunyanya kana yakavharwa nemamwe steroid bulking uye iyo inoshandiswa muhombe yakakura.
Itero steroid inoshanda nekusimudzira kuyerwa kwe nitrogen mukati memisungo. Nitrogen ndiyo inokosha pakukura kwemisumbu nekugadzirisa. Kunyanya iyo nitrogen musungo inobata, iyo inowedzera mikana yekuvaka masimba akawanda. Muviri unoda nitrogen kana uchigadzira mishonga mutsva, uye nesterodi iyi, muviri unogona kuwana zvakakwana nitrogen sezvaunoda. Inogona kubatsirawo vashandisi kuvaka zviduku zviduku zvakakosha zvikuru kana vari kuzviita kuratidzwa kana kukwikwidza. Zvisinei, vanhu havafanire kutarisira kuti chigadzirwa ichi chivabatsire kuvaka makumi mapaundi sezvavanenge vachiita nemamwe steroid akasimba asi vanogona kuvimba nayo pakuvaka misiduku miduku yakaonda kana ikashandisa sezvainofanira.
3. Kusimbisa simba rekudzivirira muviri
Apo vanhu vanofunga nezvevanabolic steroids, vanowanzotarisa zvakanyanya pamigumisiro yemigumisiro nemigumisiro yavanova nayo mumuviri wezvirwere. Vashomanana vakafunga nezvezvakanaka izvo steroidzo dzaizove nadzo mumuviri wemuviri. Primo inosimudzira mararamiro ane hutano uye akaenzana. Izvo zvirwere zvekudzivirira zvirwere zvakakosha kana zvasvika kune hupenyu hwakanaka sezvo huchibatsira mukudzivirira muviri kubva kumhando dzose dzeurwere. Methenolone enanthate inobatsira mukusimudzira masero echechi anosanganisira masero eropa, ayo ari chikamu chinokosha chemuviri wechirwere chemuviri.
4. Mishonga mumisumbu kuchengetedzwa
Steroid haibatsiri chete kupisa mafuta uye kuvaka musimba asi inobvumirawo vashandi kuchengetedza mishonga yakasimba. Muiti wega wega wega anofarira kupisa mafuta, chengetedza mishonga uye kana zvichibvira kuwedzera zvimwe. Nyaya inouya apo ichiedza kupisa sezvo imwe inofanirwa kuenderera mberi nechinangwa che caloric chinoreva kuti inofanira kupisa mafuta akawanda kupfuura ivo vari kutora. Kana catabolism inowanzoitika, muviri unopedzisira uchidya zvisikwa zvakare izvo zvingave zvinogumbura zvikuru . Ne primi, izvi hazvipo sezvinonzi anti-catabolic steroid zvinoreva kuti mitsipa yakaonda icharamba yakasimba.
Methenolone Enanthate hafu yeupenyu
Iyi steroid injectable ine enanthate ester yakanamatirwa nayo ino inoita hafu-hupenyu pamusoro pe7 kune mazuva 10 kana kuti mazuva ane 10.5. Zvisinei, izvi hazvirevi kuti mushure mezuva re10.5 chikamu chichabva chabuda pakarepo. Zvinoreva kuti pashure penguva iyi, hafu yemari yawakashandisa munguva yekujova ichasiyiwa mumuviri. Vashandi vanogona, saka, vanotarisira primi kuti varambe vachishanda kune imwe musungo, vhiki shomanana zvichida, mushure mokunge vakuyiwa kwekupedzisira. Chibereko chacho chinongowanikwa kwevhiki vashanu chete.
Methenolone Enanthate mhinduro
Vazhinji vatambi uye vashandi vomuviri vakashandisa chigadzirwa ichi vanoti ine mafuta akakwirira anokonzera madhara. Iyo inewo unyanzvi hukuru hwekuwedzera kusununguka kwemisumbu uye vascularity. Zvisinei, vamwe vakatsoropodza nekuda kwemari yadzo yakakosha yakaita kuti mumwe muumbi wekutya awedzere kutora chigadzirwa mukutya kuwana mamwe matanho epamutengo mukuru. Yakarumbidzwa pamusana pekukwanisa kwayo kukonzera kukwikwidzana uye kunoshamisa kwekuvaka muviri kwekuita kwenguva pfupi. Steroid yakareba-iyo inofanirwa nokuda kweyayo midzi anabolic madhara uye pasi uyerogenic.
Chii chinonzi Primobolan (Methenolone Acetate) uye chinoshanda sei?
Uyu ndiwo mutsara wePrimmobolan (Methenolone Acetate) unogona kurondedzerwa sendima shoma ester yeMethenolone iyo inogadziriswa shanduro yeDHT. Itero steroid inotorwa nemuromo uye inoitika kuva imwecheteyo Nibal iyo yakatanga kusimbiswa shure I 1962 ne Squibb nechinangwa chekurapa musimba kuparara uye kupererwa ropa.
Chimwe chinhu chinonakidza pamusoro peAcetate chikwata ndechekuti pakutanga, yakagadzirwa semakemikari injectable iyi shanduro asi yakadzoswa kumashure mu199 uye inorable format ingangowanikwa mune pasi pevhu asi zvisingawanzoitiki. Mazuva ano mazhinji emalabhu anoita izvi mumuromo. Iyi steroid inofungidzirwa kuti ndeyeye yakachengeteka anabolic steroid uye inosanganisira kushamisa kwekuchengetedzwa kwevanhu vakashandisa kwenguva yakareba.
Methenolone acetate yakashandiswa semushonga wekubatsira vana vasina simba, uye izvi zvinoratidza kuti zvakachengeteka sei kushandiswa kweumwe munhu. Inogonawo kushandiswa kana sarcopenia uye osteoporosis. Kushandiswa kwaro kwakanyanya, zvisinei, kuri mukurapa musikana kuparara uye kunokonzerwa nekorticoid hormone exposure. Inogonawo kushandiswa munyaya yekushaya zvokudya zvinovaka muviri. Icho chinhu chakakurumbira pakati pevarimi vemasangano nevatambi. The Primobolan depot inowanzozivikanwa sezvo vanhu vazhinji vanoda injection s bodybuilders vanodavira kuti inotakura chikwata chakasimba kupfuura chinonyorwa.
Iyo inonzi Methenolone hormone ndiyo inonyanya kushandiswa steroids mumusika. Izvo zvakare inodhura zvikuru, uye inofungidzirwa kuti yaiva Arnold Schwarzenegger's favorite steroid. Izvi zvakaita kuti zvive zvakakurumbira uye zvakakonzera vashandi vekuvaka muviri kuti vade zvayo kuitira kuchengetedza mutengo wayo uye kukumbira zvakakwirira. Chimwe chikonzero nei nei steroid iyi ichigara ichida zvikuru inokonzerwa nehupenyu hwevakadzi. Vakadzi vakawanda vakashandisa kubudirira vasina kuwana chero migumisiro. Testosterone Cypionate: Zvose Muviri Wekufanirwa Kuziva
Iyi steroid inozivikanwa nokuda kwekugadzirisa muviri. Icho chisarudzo chakanakisisa kune ani zvake anoda kuve nekufamba kwenguva shoma asi akasimba sezvo inobvumira vashandi kuchengetedza izvo zvinobudirira pavanenge vachipfuura nekucheka. Izvo zvisinei hazvisizvo zvakanakisisa kana zvasvika pakutsvaga kwekudzivirira kana kuenzaniswa nedzimwe mishonga, asi zvakachengeteka uye zviri nani kuzvishandisa panzvimbo yekushandisa mamwe mishonga ine ngozi paunotsvaka mitezo inoshamisa. Kunyangwe zviri nani; iyo inogadzirwa zvakagadziriswa, zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuenda mairabhu kuti uitange iyo. Zvisinei, ichi ndicho chimwe chezvinhu zvakakanganiswa zvakanyanya, uye naizvozvo zvakachenjera kana munhu achitsvaga mutengesi akatendeka. Primobolan (Methenolone Acetate) inobatsira mukusimudzira hutachiona husina kusimba hunobudirira asi kwete kune imwe yeimwe inowanzoshandiswa kuumba muviri steroids.
Primobolan (Methenolone Acetate) muyero
Dhiyabhorosi yakarurama inobva pane chinangwa chemushandi. Iyo inouya mupepeti, uye muenzaniso wema methenolone acetate dosage yakanaka inotevera;
Kwete yevhiki Yakarongedzwa Nhamba
Vhiki imwe 50mg pazuva
Vhiki mbiri 100mg pazuva
Vhiki yechitatu 150mg pazuva
Vhiki yechina 150mg pazuva
Vhiki yechishanu 100mg pazuva
Eek matanhatu 50mg pazuva
Vazhinji vashandisi vangasarudza kuunganidza ichi chigadzirwa ne Stanozolol kuti uwane migumisiro yakakwirira. Ichi chiyero, zvisinei, hachisi mazano ekurapa. Vamwe vashandi vemuviri vakashandisa yakakwirira kemukari mune zviyero zvakakwirira uye vasati vawana mimwe migumisiro. Nhamba yacho inonyanya kuvimba nekunzwa kwevashandi saka zvakachenjera kuona mazano ehutano usati wasarudza kuenzanisa.
Nhamba yacho ichasiyanawo zvichienderana neicho. Kazhinji mahwendefa anouya mu5 uye 25mg simba. Zvinokurudzirwa kuti mumwe atange kubva pamusana wepamusoro kuti aongorore kushanda kwemuviri kune kemukidhi asati asvitsa kune imwe yepamusoro.
Muzviitiko zvakawanda, the Primobolan cycle inopera kusvika kumavhiki. Izvozvo zvinosanganisira kutengesa, izvo zvinosanganisira kupisa mafuta, zvinobatsira mukuchengetedza mitsipa yakaonda uye inobatsira vashandi kuti vaite basa ravo kune zvakanyanya. Icho chinosanganisirawo kubvongodza, izvo zvinobatsira vashandi pakuwana mishonga mitsva, kuwana hutema masimba nesimba. Iyo ikamu inonyanya kushandiswa kana inoshandiswa nemamwe makemikari kune vanhu vanoda kutsvaga migumisiro inoshamisa.
Methenolone Acetate migumisiro
Munyika inovaka muviri, steroid ino inozivikanwa nokuda kwekugona kwayo mukunwisa mafuta uye kushandiswa kwemaviri. Zvakanakisisa kana zvichishandiswa pakucheka mhepo kuitira kuti vashandisi varambe vachichengetedza mishonga yavo kunyange panguva yekudya kwe-calorie. Kana yakashandiswa zvakanaka, inogonawo kubatsira vashandi vekuvaka pakuvaka masimba matsva. Steroid haisi ye17-alpha-alkylated pane iyo iyo 1-methylated yehupenyu hwehupenyu. Izvozvi, saka, inoshandiswa zvakanakisisa pakati pevanabolic steroid miitiro apo isiri-nguva kubatsira vashandi mukuchengetedza musimba wavo uye kuwana simba remuviri. Izvo zvinyoro uye zvakanaka kune vose varume nevakadzi.
Chinhu chakanakisisa pamusoro peSteroid iyi ndechekuti kunyange kana yakashandiswa pamutengo wepamusoro, haitungamiri kune anodyidzana isrogen uye izvi ndizvo zvinokurudzirwa kuti kuderedza zviputi zvepamu. Inogonawo kushandiswa kugadzirisa zvirwere zvehutachiona pakati pevarwere vane HIV / AIDS.
Zvinokonzera kuderedzwa kuduku kuenzanisa naDeca Durabolin uye Testosterone pamusoro pevanabolic zvinokonzerwa nehutachiona hwehutachiona hwebasa, kusakwanisa kutendeukira kuDHT uye nekuda kwekushayikwa kwemafuta kune esrogen. Vashandi vanofanirwawo kutarisira kuwedzerwa kunoshamisa kwe testosterone yavo yose inokurudzira hormone-binding globulin (SHBG) uye LH, hormone inonzi luteinizing. Uyezve, kubudirira kwavanowana kubva kune steroid ino vari kutsigira, uye iyo inowanikwa inoonekwa kana kusvika masvondo mashanu. Zvigumisiro ndezvekuvandudzwa kwemuviri, kuwedzera simba, kuderera kwemafuta, kuonda kwemisumbu yekuchengetedza uye kuwedzera simba nesimba.
Methenolone Acetate hafu yeupenyu
Ichi chemikemikari inogona kuonekwa kune anenge 4 kusvika kumavhiki e5. Yayo anabolic / androgenic chiyero 88: 44-57. Inonzi methenolone ine hafu yehupenyu hwemaawa e4-6 izvi zvinoreva kuti mushure mekunge nguva iyi, hafu yemari inoshandiswa nemushandisi inorega iyo hafu yayo inoramba iri mumuviri, uye inogona kuonekwa kusvika kumavhiki e5.
Methenolone Acetate inobatsira
Primobolan (Methenolone acetate) ndechimwe chetero steroid inoshamisika pakati pevashandi vezvemuviri nevatambi nekuda kwezvikomborero zvayo zvinoda kufa. Inorondedzerwa nevakawanda segadziriro yakakwana yezvakanyorwa steroid. Iyo ndiyo mhinduro yakanakisisa yevamwe vatambi uye vadzidzisi vemumuviri vanove vakanyanyisa kana kuti vanotarisana nenyaya dzakadai sechiropa, kukuvadza, uye zvimwe zvinetso zveropa kana uchishandisa oral steroid sezvazvinouya nechese migumisiro yakawanda uye zvisingabatsiri zvikomborero zvinosanganisira;
Inobatsira pakusimudza simba uye simba - vashandi vanogona kuvimba nenyaya iyi kuti iwedzere simba uye simba munguva yekuderedza. Inoshanda nekubvumira nitrogen kuchengetedza icho chinhu chinokosha chekugadzira magetsi.
Zvirongwa pakuvaka masimba- izvi zvinowedzerawo kuitrogen kuchengetedza. Chivakwa chemuviri chinosanganisira nitrogen, uye nekubatsira mu nitrogen kuchengetedza, steroid inosiya mamiriro akakodzera ekuvaka masimba matsva uye kuchengetedza vakwegura.
Inopedza ngozi yevagari venyika- iyi steroid inonzi inove yakachengeteka mumusika uye vashandisi havafaniri kushungurudzika pamusoro pemagadziro evanhu.
Inowedzera huwandu hwekuparara kwemafuta- ichi ndicho chinangwa chikuru; achibatsira mukugadzirisa. Inobatsira mukuderedza iyo yose muviri wemafuta iyo inobatsira inobatsira musimba yekuvaka uye kuwedzera simba revashandi.
Methenolone Acetate mhinduro
Vanhu vazhinji vakashandisa chigadzirwa ichi vakada migumisiro, uye iyo inoshamisa inotengeswa mutengo. Vanotaura kuti migumisiro inobhadhara mari yose yakashandiswa pairi uye inogona kukurudzira kune vose varume nevakadzi vari kutarisa kuti varasikirwa nemafuta avo panguva vachichengetedza mishonga yavo yakaonda.
Iyo yakave ichirumbidzwawo nokuda kwehuwandu hwemigumisiro yadzo pamwe nevashandisi vakawanda vachiratidza kuti ndeimwe yepamusoro uye yakanyanya kunyorova steroid yavakawana. Mhinduro yacho inokurumidza zvakare, uye hafu yeupenyu inofadza. Zvisinei, iyi haisi steroid yevashandisi vanoda kuona zviitiko zvinoshamisa kwenguva pfupi. Inofanira kuiswa pamwe nemamwe makemikari kuitira kuti ibudise zvakakwirira, zvinoshamisa.
Iine anebolic mild effect, uye potency yayo inofungidzirwa kuti yakaderera kupfuura iyo nandrolone decanoate. Ichi ndicho chikonzero nei methenolone inonyanya kushandiswa pakucheka maitiro uye haisati yashandiswa pakuwedzera kwehuwandu.
Iyo haitendeuki kune estrogen, uye naizvozvo inoratidzira zviduku zvinokonzerwa nemigumisiro uye zvakanakisisa zvakanaka. Izvo zvakanakawo kune vanhu vane hanya kana vakashandisa nenzira yakarurama pasina kunyengedza. Vashandi 'havafanire kutarisira chero kuchengetwa kwemvura uye pfuma chete inotarisirwa ndeyehutsika hutsika.
Methenolone Enanthate vs Methenolone Acetate yekucheka
Kucheka-shanduka inzira inosanganisira kuderedza o muviri wemafuta uye kuchinja huwandu hwahwo huve hutsinye hwakashata. Vanhu vakawanda vanodya zvokudya zvakagadzirwa nguva nenguva uye zvokudya zvakagadzirwa muhushutoriori izvo zvinotungamirira pakuunganidza mafuta mumatumbu. Izvi hazvibatsiri kunyanya kune vatambi uye varimi vemuviri uye zvinogona kukanganisa kushanda kwavo panguva yemakwikwi. Inodziisawo pahutano hwehutano. Ivo, saka, vanoda kuita zvinodiwa kuti vaderedze mafuta aya uye Primobolan steroids ndiyo nzira yakakwana yeiyo, uye chikamu chakanakisisa ndechokuti vanozoona kuwanikwa pashure penguva pfupi.
Itero steroid inoshanda zvikuru munguva ye caloric- muchengeti wegore apo munhu anoshandisa koro-calorie kudya uye paanobva pamakwikwi. Itero steroid inoshanda nekushandura mafesi mumatumbu akaonda uye kunyange zviri nani; iyo inova nechokwadi chokuti maikisi anenge aripo haashandisi. Inopa migumisiro yakawanda nyore nyore uye yakachena kuve nechokwadi chokuti migumisiro yechirwere ishoma. Izvi ndechokuti hazvizoshanduri ku estrogen uye hazvikonzeri mvura yekuchengetedza. Vashandi havasi kuzununguka, uye saka vanozvisiya mumamiriro ezvinhu akanaka kwazvo.
Vashandi vanofanira, zvisinei, vanocherechedza kuti nekuda kwekuti vari kushandisa chidimbu ichi kuderedza mafuta hazvirevi kuti havafaniri kutarisa izvo zvinodya. Kunyange zvazvo yakave yakagadzirirwa kudzivisa mafuta kuunganidza, kudya kwakashata kuchaita kuti vatsause.
Zvose Methenolone Enanthate uye Methenolone Acetate dzine shanduro yakafanana kana ichisvika kumucheto wekucheka sezvo yakagadzirwa nemishonga yakadaro chete iyo Methenolone Enanthate ine ester yakanamatirwa nayo inoita kuti migumisiro inopa iyo iwedzere kuderedzwa.
Methenolone Enanthate yekucheka mhepo
Ichi chikamu chinonyanya kubatsira kana zvasvika pakucheka. Yakagadzirirwa kubatsira pakuderedzwa kwemafu nekuita kuti inoshandurwa kuti iome. Ichi chikamu chine ester yakaiswa pairi, iyo inoreva kutadzisa kusunungurwa kwe steroid kubva mujisi kumuviri wemuviri. Mano ayo ekucheka ari pamusana wepamusoro kunyanya nekuda kwekwanisiro yekuzvibatanidza pachayo ne-androgen receptor uye kuve nechokwadi kuti hapana madhara. Chimwe chikomborero chikuru chinouya nacho ndechekuti inogonesa kuti mishonga inonda yakachengetedzwa munguva refu. Izvi zvinoreva kuti kunyange zvazvo mafuta ari kubviswa, hutundu hwakakosha hauna kuiswa mune izvozvo. Vashandi vanowana kuchengetedza mishonga yavo, uye vanoramba vachivaka kuvaka.
Chii chimwe? Steroid yakagadzirwa kuti igare kwenguva yakareba mumutambo zvinoreva kuti kunyange mushure mekuvhara kwekupedzisira, maitiro ekucheka mafuta achaenderera mberi kwemavhiki asati apera mukusanganiswa. Kana mafuta apera, kubatana kunowanikwa, uye mutambi kana muvakidzani anotanga kuona chimiro chakasimba chemazamu, uye ichi ndicho chinangwa nguva panguva yekucheka.
Kunyange zvazvo steroid iyi isiri kushanda seEnanthate, hapana mubvunzo kuti inobatsira zvikuru mukucheka mafuta. Icho chimwe chezvinyorwa zvinoshanda zvakanyanya steroid mumushambadziro wekucheka. Iyo inoshanda nenzira imwecheteyo seMethenolone Enanthate asi steroid ine zvishoma hafu yehupenyu kupfuura iyo yekupedzisira. Icho chinoita kuti mafuta ose akaipa achinjwa kuva mishonga yakaonda saka nokupa vashandisi zvavanoda.
Iyo michina miviri inobatsira inopiwa iyo iyo inoshandiswa mumutero wakakodzera uye nenzira. Ive yakashandiswa zvakanyanya kuderedza mafuta panguva yekudya, iyo ndiyo nguva apo munhu anodya zvokudya zvakawanda zvakaderera uye anotarisira kuti panzvimbo yezvokudya zvichishandurwa uye zvichengetedzwe semafuta, zvichashandurwa kuva mishonga yakaonda. Izvo zvinonyanya kushandiswa kana zvichishandiswa panguva isina-nguva, nguva iyo mushumiri ari kure nemitambo kana kukwikwidza.
Methenolone Enanthate vs Methenolone Acetate ye bulking
Kubhadharira inzira inotarisira kubatsira vatambi uye vashandi vemuviri kuti vawane simba romuviri nesimba. Izvi zvinogadziriswa nekuderedza mamwe makoriyumu muitiro iyo muviri unoda. Mutumbi unoshandisa aya makorikori kuti uite mafuta uye misumbu.
Zvisinei, hapana anovaka muviri anoda kuti ave nemafuta akawanda kudarika mishonga, uye iyi ndiyo iyo steroid inopinda. Steroid inofanirwa kuve nechokwadi kuti misi miviri yakaumbwa kupfuura mafuta iyo nzira yakanakisisa yekuchengetedza muviri muhupenyu hwakanaka pavanenge off-competition. Izvo zvinangwa chinangwa pakuumba hutundu hwakawanda huripo pamakwikwi, kushandiswa kana munhu achidzokera kumutambo. Inotumidzwa se-off-bulking.
Methenolone Enanthate uye Methenolone Acetate haisi yakanaka pane izvi sezvo inonyanya kureva kubvisa mafuta panzvimbo yekukurudzira kushandiswa kwayo. Zvisinei, akaiswa pamwe nemimwe michina, zvigumisiro zvinoshamisa. Itero steroid inogona kubatsira vashandi kuwana huwandu hwemasimba asi kuti vasvike izvi, vanofanira kuishandisa mumutengo wepamusoro.
Itero steroid haisi kungotemwa kunze kwekusimudzirwa kwemaonda masimba. Zvisinei, ichiri kubatsiro sezvo isingaiti basa reestrogenic. Izvi zvinoreva kuti hazvikurudziri kuchengetedza mvura, uye naizvozvo, chero mashoma akawana mushure mekushandisa iko ichava 100% yakaonda miviri mizhinji zvisinei kuti zvingave zviduku sei.
Primobolan depot, zvisinei, iyo steroid yakakura apo inosvika kumatambo ekusimudzira. Izvi zvinokonzerwa nekukwanisa kwayo kusimbisa simba rekuwedzera iro rinogona kubatsira zvakanyanya mitsipa mukutsungirira panguva yemakwikwi uye nekudzoka pamusana pekukuvadzwa. Uyewo, chokwadi chokuti hachisi chimiro chakanaka chemaviri musimba chinoita kuti zvive zvakakodzera kune vatambi vakawanda sezvo vakawanda vavo vasingadi kuwana misi miviri. Kana zvakanyanya, uwandu hunoita kuti vanzwe vasinganzwisisiki uye kudzivisa kushanda kwavo.
Methenolone Enanthate vs Methenolone Acetate ye stacking
Chinangwa chemutambi wose nemuviri wemuviri ndechekuva nemuviri wakakwana. Vakawanda vavo vachaita chero chinhu chipi zvacho kuti miviri yavo ive yakakosha kunyanya kana iri nguva pfupi vasati vasvika. Iyi inguva iyo inonzwa sokuti vari kurasikirwa nayo uye vakagadzirira kugamuchira chero mhinduro inogoneka.
Vachadya, vanoenda kunotamba asi pakupedzisira, zvigumisiro hazvizonzwi zvakanaka sezvavanoda. Mhinduro inotevera yekudzokera kune iyo, iyo ndiyo inonyanya kushanda i steroid. Dambudziko rinouya apo iyo migumisiro inopiwa nehumwe rudzi rwe steroid haisi kugutsikana kana kukurumidza zvakakwana uye chisarudzo choga chinosara ndechekubatanidza huwandu hwavo kuti hurumidze kubatsirwa. Imiti yePomobolan inofanira kuva nemamwe marudzi e steroid.
Zvakakosha kuziva kuti havasi steroid dzose dzakakosha kushandiswa pamwechete. Munyaya iyi, Methenolone Enanthate uye Methenolone Acetate haigoni kuiswa. Ichi ndechokuti vakagadzirwa kubva kune izvozvi zvinoshandiswa, uye saka panzvimbo pokubatsira, vanogona kuzviita zvakanyanya kuipa. Izvo zvinogona kukanganiswa nemigumisiro zvinopetwa kaviri nekuda kwekudarika.
Kubudirira kwezvinhu izvi zvinogona kuwedzerwa chete kana kushandiswa pamwe chete nedzimwe steroid inokodzera. Itero steroid iyo iyo inosarudza kuwirirana nemigadzirwa iyi inofanira kunge yakabatana uye isingafaniri kuva nemigumisiro kune vashandisi.
Iyi steroid mbiri inonyanya kukwegura mafuta, kuwanda kwemaviri musimba, uye kuchengetedza misi. Muiti wekugadzira muviri angave achida kuwana mamwe mazano asina kupa steroids, uye ndicho chikonzero kuvharidzira kuchauya kuti kuwedzere zvimwe zvinowanikwa. Primobolan inogona kuiswa pamwe nemimwe mishonga yakadai seHCG, Nolvadex kana Clomid, iyo yose inonzi testosterone-stimulating drugs inenge yakakodzera panguva yaP Primobolan chete. Vamwe vashandisi vanosarudzawo kuvhara muromo wemuromo neTesttosterone derivatives, Dianabol uye Anadrol 50 panguva yekudhinda kunotarisa uye kukurumidza mhinduro. Vakadzi, avo vanongoda kutora steroid muyero yakaderera, vanogona kuisunga nayo Winstrol or Anavar.
Primobolan inozivikanwa nekuda kwezvikomborero zvayo, uye inozivikanwa seimwe ye steroid inoshamisa kwazvo nekuda kwechimiro chayo uye chekuti inopa zviduku zvishoma kuvashandisi. Inonakidzwawo nokuti inouya ne zero estrogenic migumisiro zvisingaiti miyero uye nekuda kwesimba rayo re androgenic rinovimbisa kuti hapana maitiro uye androgenic anoenzaniswa nemamwe steroid. Izvi ndezvimwe zvezvikonzero zvikonzero nei steroid yakakura pakuzivikanwa uye nei vashamisi vakawanda uye miviri inosarudza iyo kune zvimwe zvakagadzirwa zvakadai seAnavar. Izvo zvave zvichionekwa zvichibata kunyange vana vaduku nevakadzi vane nharo nekutora uremu pasina kuratidza chero migumisiro yechirwere. Nezvo zvakataurwa, hapana mubvunzo kuti chinhu chikuru chakakosha mari yekushandisa.
Zvisinei, zvose zvakanakisa zvinouya necheso rakatadzawo, uye izvi hazvisi izvozvi. Inouya nemigumisiro yaro yakasiyana-siyana iyo inofanirwa kuve yakangwarira zvikuru kunyanya pamusoro pesero uye nguva yakakodzera yekuishandisa. Nokuti anotanga, inenge ine simba ine vanabolic isina simba kana ichienzaniswa nedzimwe steroid. Heino tsanangudzo yakazara yemamwe emigumisiro.
Kuva DHT-derivative anabolic steroid, Primobolan haikanganwi nearomatase yayo. Izvi zvinoreva kuti pasinei neyero, hazvibvumiri uye naizvozvo, haritauri chero yeserogenic side-effects. Izvi zvinokonzerwa nemigumisiro yakadai sekukwirira kweropa, gynecomastia uye kuchengetedza mvura. Vashandi vanogona kunyatsoshandisa chigadzirwa ichi pasina kutya kwekutarisana zvakadaro.
Primobolan inozivikanwa nekuve neine simba uyerorogenic simba kana ichienzaniswa nezvimwe steroid seTesttosterone. Zvisinei, ichiri kutowedzera kukonzera dzimwe uyerogenic migumisiro yemahara, kunyanya kune vashandi vanogona kushandiswa kunyanya munyaya yekudarika. Dhiyabhorosi yemigumisiro yakadaro asi yakadzika. Yese anabolic steroid ine maitiro akasiyana-siyana emigumisiro iyi, zvichienderana nesimba reanbolic rating. Primobolan iri kure neanabolic steroid ine yakaderera zvikuru ye androgenic, asi izvi hazvirevi kuti vashandisi havafaniri kutarisa mungozi inogona kuuya kunyange neana duku yavanabolic. Iyi migumisiro yemigumisiro inosanganisira kunyanya kuvharidzira sebum, kunokonzerwa nekanyanya mafuta, ganda rinonyanya kuitika nekuda kwekudzivirira sebum, mvere dzakawanda pamuviri uye chiso uye mune vamwe varume; zvinogona kuguma kuM Male Pattern Bald.
Kune vashandi vechikadzi, migumisiro yacho inogona kusanganisira virilization zvinokonzera zvinosanganisira kukurudzirwa kwevarume nevakadzi. Izvi ndizvo; muviri uye chiso chebvudzi kukura uye izwi rakadzama. Mimwe migumisiro inogona kunge inosanganisira kusagadzikana kwepanguva yekuenda kumwedzi uye kuwedzera kwekugadzirisa. Izvi zvinowanzokonzerwa nekudarika uye hazvifaniri kuwedzerwa kana kudhesa kuchichengetwa pamwero wakakodzera uye kana kupoteredzwa kwaro kuchienzaniswa.
Chimwe chezvakanaka zvekucherechedza nezve Primobolan ndechokuti steroid haifaniri kuwirirana nemakemikari eromatization kana ma enzyme anokonzera kutendeuka kweTestterone kune androgenic Dihydrotestosterone. Nenzira iyi, vashandisi havazove vari pangozi yekuziva kutendeuka kwePermobolan kune yakasimba uyerogrog iyo inoreva kuti simba re androgenic mu Primobolan rinoramba riripo, uye ndizvo zvakaitawo migumisiro. Kana inoshandiswa maererano nemirayiridzo kana pamutengo wakakodzera, migumisiro yechirwere haisipo.
3. Endogenous Testosterone uye HPTA yekugadzirwa
Iko Testosterone Inogumirira uye HPTA yakagadzirwa inowanzobatanidzwa nevanabolic steroids kana vashandi vasingakwanisi kuchengeta maitiro avo kana vakatorwa nokuda kwechinangwa chakaipa. Zvisinei, kana yakatorwa kuti ishandiswe zvakanaka, panguva yakakodzera uye yakawanda, steroid inovhara HPTA uye inogumira Testosterone yakagadzirwa zvakakwana, uye Primobolan haisi yega. Izvo zvinyangwe zvinyoro, uye ndizvo zvakaitawo migumisiro. Iyo kudzvinyirirwa kwe HPTA inobva pachirwere uye nekuda kweiyo inowanikwa dhigirii yePhmobolan muvarimi vemuviri.
Semuenzaniso, kana mumwe akashandisa semurairo wemishonga, iyo inogona kubva kubva ku20 kusvika ku30mg pazuva, zvino steroid iyi inogona kuratidza kuderera kwe HPTA kuderedza. Zvisinei, izvozvo hazvikwanisi kuyerwa kwevanhu vanoita zvirongwa zvekuvaka nekuchengetedza misumbu. Vanofanirwa kuenda kumakiromita anenge 45mg pazuva, maererano nevanotsvakurudza nezvezvokurapa, vakaratidza chiitiko chekupedzisira cheTesttosterone. Pasina mubvunzo, 45mg zuva nezuva ichiri chidiki. Izvi zvinoreva kuti zvichibva pakuziva kuti iyo yakakosha miviri yevashandi vepanyama inowanikwa pa100mg, zvino vashandisi vanofanira kutarisira kuwana mamwe emigumisiro iyi. Zvisinei, nhamba yekudzvinyirira ine steroid iyi yakaderera pane dzakawanda dzevanabolic steroid mumusika, asi iripo; iripo.
Zvakakosha kuti vese vashandisi vatevere maitiro anotenderwa uye kutenderera uye kuti vave nechokwadi chokuti vanotevera mazano anonzwisisika uye akachengetedzeka. Purogiramu inosanganisira kushandisa testosterone-stimulating compounds kwemwedzi unofanirwa kutanga pakarepo mushure mokunge mhirizhonga yadarika. Izvi zvinobatsira kuti udzore hupi hupi hunogadziriswa hwekugadzira testosterone uye chero humwe huro hunobudiswa hunoitawo, hunoderedza ngozi dzeHIVTA kukuvara.
Hungu, zvimwe zvePrimmobolan aftermaths zvinogona kusanganisira zvinetso zvepfungwa uye zvinokonzerwa neholesterol yakaipa iyi inowanzova nemigumisiro yakawanda pakati peana analiclic steroid uye Primobolan haisi iyo iyo ndiyo mamiriro ezvinhu anosanganisira kuwedzera kwekutsvaikorori yakaipa inonziwo LDL, uye kuderera murudzi rwakakodzera rweku cholesterol inonziwo HDL. Iyi mamiriro ega inotungamirira kune ngozi yakawanda ye arteriosclerosis.
Vashandi vanofanira kuziva kuti iyi mamiriro acho anowirirana neyero. Kana mumwe achitevera maitiro akanaka uye anokurudzira uye kuenderera mberi, mikana yekutambudzika kubva pane izvi haisi. Iyo yakakwirira kuyerwa, iyo yakakwirira mikana uye riskier ichava. Uyewo, vanofanira kuchengeta nguva yekushandiswa. Hazvibvumirwi kuti mumwe ashandise chigadzirwa ichi kwenguva yakareba sekupedzisira; kuunganidzwa kwezviitiko zvayo mumuviri kunogona kukonzera iyi nyaya.
Nzira yekupa steroid inotorawo basa. Iko kune maBhaibheri maviri, muromo uye injectable format. Izvo zvinogadziriswa zvinonzwisisika kuratidzira njodzi dzakanyanya kukura dzematambudziko emwoyo zvichienzaniswa neshanduro injectable. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvinoita kuti steroid yemuromo isanyanya kunyanya kunakirwa. Chikonzero chekuti nei ichiratidzira ngozi yakawanda ndeyokuti cholesterol inonyanya kubudiswa muchiropa, uye mushure mokupa steroid mumuromo, chigadzirwa chinounza kuwedzera hepatotoxicity iyo inenge yakabatana nekuchinja kusina kunaka kwekulesterol.
Nzira yakanakisisa yekudzivisa izvi ndeyokuteerera kuyerwa, kutenderera nekucherechedza kudya. Vanhu vanofanira kuenda kunzvimbo dzakachena uye kudya nechokuita necholesterol. Ingoenda chete kwezvokudya zvine cholesterol yakanaka yakadai sehove sezvazvinenge zvakakosha muvanabolic steroids cycle.
Zvose zviviri zvinokonzerwa nejectrop and oral Primobolan zvine chisarudzo cheC17-alpha alkylation. Ichi ndicho chinhu chinowanzoonekwa mune vazhinji vana analiclic steroid iyo ine simba yekuratidza hepatotoxic madhara asi pane zvishoma. NeAprimobolan yemuromo, hakuna kumbove neine chiremera chechiropa chinoshandiswa kunetseka pamusoro. Chinhu chimwe pamusoro pePhmobolan ndechekuti ine chinhu chinobatsira muhupatic metabolism nekusagadzikana kusagadzikana naizvozvo, vashandisi havafaniri kukanganwa mikana ye hepatotoxicity. Mhosva dzekushaya kwechiropa dzinowanikwa asi dzinotarirwawo nehuwandu hwehuwandu uye huwandu hwechiremba, inowedzera mikana yekuwana dambudziko iri. Nzira isina kuiswa inopa kwete njodzi dzechiropa chekutyisa zvachose.
Zvose Methenolone Enanthate (303-42-4) uye Methenolone Acetate (434-05-9) ndeyedzimwe steroid inowanzoshandiswa, kunyanya yekucheka. Kunyange zvazvo inonzi oral version ndeye Methenolone Acetate powder, iyo yakanga isina kutanga yakagadzirirwa kushandiswa kwekuvaka muviri, yakaratidza migumisiro yakaisvonaka mukubatsira varimi vemasvingo nevatambi kuderedza mafuta, kuchengetedza mishonga yakaoma, uye kuvaka mishonga matsva uye kuwana huwandu hwemasimba.
Methenolone Enanthate inowanzotengeswa pasi pezita rokuti Primobolan depot, uye inobva pakubatanidza ester kuMethenolone. Inonyanya kushandiswa nevanhu vane pfungwa dzakanyanya kune estergenic nemigumisiro sezvinouya nemunhu. Iyo yakaisvonaka ine unyoro uye yakanakisisa mukugadzirisa mutsara, kuonda kwemisumbu yekuchengetedza uye kana yakashandiswa zvakajeka, inogona kubatsira mukuwana misimba yakaonda uye musimba mashoma.
Munyika dzakawanda, zviri pamutemo kuti uve nemakemikari aya uye inogona kushandiswa pasina mushonga wezvokurapa. Nzira isina kuvhiringidzika inowanzowanika kunyange zvazvo kana mumwe ari kutsvaga chikwata chemishonga, vangave vachida kuitsvaga mumabhandi pasi pevhu. Izwi remuromo harisi nyore.
MuU.S., vane chirongwa ichi pasina chiremba chiremba hachibvumirwe mvumo sezvo ichionekwa sechikwata chemishonga kana mune dzimwe nzvimbo dzakadai seUnited States, munhu anogona kuitora pasina mari. Saka zvakanaka kuti munhu anzwisise mutemo mune imwe nzvimbo asati awana chigadzirwa.
Pakufananidza Primobolan enanthate uye Primobolan acetate, unofanira kutora zvinotevera kusiyana;
Inanthate inogadziriswa apo acetate inotorwa nemuromo
Iyo inorable format inodhura zvikuru, asi inonyanya kuenzaniswa kana ichienzaniswa nezwi rinotorwa. Ingotenga acetate kana une mari yekupisa
Kunyoresa ndiyo yakachengeteka yakaguma nematengesi akawanda kunze uko. Vashandi vanofanira kungwarira pavanosarudza kuitenga; kana zvisina kudaro, vangaisa pasi pakutevedzera sezvavanoedza kuchengeta mari yavo
Kana ikatorwa pamutero wakarurama, migumisiro yechirwere inenge isiripo kunze kwekuti kune avo vanogona kuzvidya
Kunamatira kunogara muhurongwa kwenguva yakareba, kusiyana neacetate inoshanda zvakakurumidza asi inobva kunze kwomuviri nokukurumidza. Chero ani zvake anoda kuti steroid yavo inoderedzwa kwenguva yakareba haifaniri kuedza acetate sezvo ichaguma mukunyangadza.
Methenolone acetate haigari kwenguva yakareba mumuviri womunhu kana ichienzaniswa nejenjereji yakarongeka asi ichiri kubatsirika mukuwana mutsara asi kune vanhu vasiri kutsvaga migumisiro inoshamisa. Primobolan enanthate yakanyanyogadzikana mumuviri womunhu uye inogara kwenguva refu. Izvozvi, saka, iyo inoshandiswa zvakanyanya.
Primobolan (Methenolone Enanthate uye Methenolone Acetate) nokuti sero
Kutenga Methenolone enanthate nguva dzose iri nyore pane kutenga Methenolone acetate. Mune dzimwe nyika, iwe unogona kuzviwana zviri nyore muzvitoro zvinodhaka, asi mune zvimwe; iwe unofanira kuenda pasi pevhu kuti uiwane. Iwe unogona kudikanwa kuva nechirongwa chechiremba kuti uwane. Iwe, saka, unoda kunzwisisa mitemo yehurumende iyo ichakutungamirira pane nzira yokutenga steroid. Unogona buy methenolone acetate online kana tarisa a methenolone acetate / enanthate supplier kubva kunharaunda yako kune imwe nzira yekuchengetedza yakachengeteka.
Kana uchida kuwana mishonga yemishonga, tsvaga a methenolone acetate / enanthate, uye iwe unogona kuronga kuti ungagamuchira sei chigadzirwa. Kune zvakawanda zvevashambadziri kunze uko, uye iwe unogona kusarudza kupa yako zvakananga sezvachave yakanyanyisa.
IK Morton; Judith M. Hall (6 December 2012). Concise Dictionary Yevashandi veParamende: Properties uye Synonyms. Springer Science & Business Media. pp. 178.
JUCKER '' Kufambira Mberi mune Drug Research / Fortschritte der Arzneimittelforschung / Progrès ...
K. Morton, Judith M. Hall. '' Concise Dictionary yeVashandi veParamende: Properties uye Synonyms rakagadzirirwa naDetlef Thieme, Peter Hemmersbach. '' kupopotera mumitambo. '
Larry Jameson; Leslie J. De Groot (25 February 2015).Endocrinology: Vakuru uye Vana VeE-Book. Elsevier Health Sciences. pp. 2388.